Nlekọta Nlekọta - Foton Motor Group Co., Ltd.
sistemụ ọrụ ụwa
Anyị na-adabere na netwọk mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ iji nye ndị ọrụ ụkpụrụ ngwaahịa, ọrụ, ngwa, ọzụzụ na nkwado teknụzụ. Foton amalitela ọrụ "Nlekọta Nlekọta" nke nta nke nta. Site na mpaghara nkesa na-ahụ maka enyemaka nke mpaghara 13, ụlọ ọrụ ọzụzụ mpaghara mpaghara 12, karịa netwọkụ ọrụ mba ofesi 1500, Foton na-emeziwanye usoro ọrụ ya zuru ụwa ọnụ iji mejuo ndị ahịa chọrọ nlekọta na iji nye ha ahụmịhe miri emi. Foton na-elekwasị anya na ndị ahịa chọrọ ahụmịhe mgbasa ozi ma mepụta ihe niile, na-ebu ọrụ ahaziri iche na ndị ọkachamara maka ndị ahịa.
Parts Nkesa Center Gburugburu Worldwa
hụ na ịkwọ ụgbọala zuru oke
Nlekọta nlekọta ndụ niile iji hụ na ịkwọ ụgbọala zuru oke. Ọrụ dị iche iche agbakwunyere bara uru na-ewetara ndị ahịa uru karị, na-egosi ezi nlekọta FOTON. Ijide mkparịta ụka na oge etiti oge iji ghọta ihe ndị ahịa na-achọ maka imeziwanye n'ihu na ịchụso ịdị mma.
Advanced ule na idozi ngwaọrụ, niile na-gburugburu ngwaike nkwa; na-eduga ndị otu ọrụ nke usoro ọzụzụ dị ike na ndị ọkachamara ọkachamara na-ahụ maka ọrụ.
PMS, EPC, WMS, DMS na CRM zuru ụwa ọnụ na-eduzi sistemụ ihe ọmụma maka ijikọ ọnụ nke ngwongwo na ngwongwo 3 (mpaghara etiti ụwa, mpaghara mpaghara mpaghara na ọdụ ọrụ (ụlọ ọrụ na-enweghị atụ)), nke na-eme ka ọwa dị mma. enyocha ndị ahịa.
100% ezigbo akụkụ, ụgwọ dị ala, na-echekwa uru ụgbọ ala; uzo akụkụ price, oru hour na-eri na mmezi usoro; ezigbo ọwa maka ndị ahịa na-eme mkpesa.
AKWERSKWỌ AKWVKWỌ AKW .KWỌ
Kpuchie isi mpaghara
FOTON eguzobela otu netwọk ọrụ esenidụt mejupụtara 1,485 ọrụ na-arụ ọrụ na ihe karịrị mba 80 na mpaghara, gụnyere 168 larịị-1 outlets ọrụ nlekọta ọrụ na 1,317 larịị-2 outlets ọrụ na-ere ahịa, na 149 larịị-1 ahịa na-ekesa na 1,205 larịị-2 ndị na-ere ahịa ahịa, na-ekpuchi isi mpaghara na Asia, America, Africa na Europe.
Iwu ọrụ na-eduzi ọrụ
Na-elekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa, FOTON arụpụtara ọrụ ụlọ ọrụ na-eduga ọrụ iji nye ndị ahịa ogologo oge ikike. Iwu ọrụ ahụ dịgasị iche site na ụdị, ahịrị ngwaahịa na ụdị. Maka nkọwa nke usoro iwu na iwu ikike nke iwu, biko rụtụ aka na akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala.
N'VLỌ NCHE OZI Ọzụzụ
ọzụzụ ọzụzụ ọrụ niile
Ebe a na-azụ ọzụzụ
FOTON ewepụtala ụlọ ọrụ ọzụzụ maka ọrụ iri na abụọ na Thailand, Russia, Vietnam, Saudi Arabia, Kenya, Cuba, Peru, Chile, Iran, Philippines, Columbia na Algeria. FOTON na-enyezi ihe kariri mba na mpaghara 100 ọzụzụ ọzụzụ. FOTON na-enye ndị na-enye ọrụ ọzụzụ ọzụzụ na gburugburu ọrụ site na ụlọ ọrụ ọzụzụ ọrụ gburugburu ụwa. Thelọ ọrụ ọzụzụ ahụ na-enyekwa ụlọ ọrụ ọrụ ọhụụ ọzụzụ na njikwa ọrụ na teknụzụ ọrụ iji nyere ndị ọrụ ọrụ aka ka ha kwekọọ na FOTON na iji nye ndị ahịa ọrụ ka mma.
Ndị otu ahụ nwere ndị nkuzi 30 ugbu a, ihe karịrị asụsụ iri abụọ, gụnyere Bekee, French, Spanish, Arabic na Russian. Traininglọ ọrụ ọzụzụ na-enye ọzụzụ maka njikwa ọrụ, njikwa ngwa ọrụ yana injinia ọrụ, na-achọ ịnye ndị ahịa ọ bụla ọzụzụ mmụta otu oge.